လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: January 2015
မပျော်နိုင်သူတို့ရဲ့ လက္ခဏာ (၇) ချက်
Friday, January 30, 2015 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
စိတ်ပညာ သုတေသန မဂ္ဂဇင်း Psychology Today ၏ အဆိုအရ လူသားများ ပျော်ရွှင်မှု၏ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်း ထိသည် လူသားများ လွှမ်းမိုးပြုပြင် ချယ်လှယ်နိုင်သော အပိုင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လူသားများ ပျော်ခြင်း မပျော် ခြင်းကို ပြင်ပ ကိစ္စများ က လွှမ်းမိုးမှု ရှိသည် မှန်သော်လည်း ထိုကိစ္စများ အပေါ် ခံယူသည့် လူသား၏ စိတ်ဓာတ် ကလည်း ထိုလူကို ပျော်စေ စိတ်ညစ်စေဟူ၍ ကွဲပြား သွား တတ်သည်။
အောက်တွင် စိတ်ခံယူပုံ လွဲမှား၍ မပျော်ရွှင်နိုင်သူတို့တွင် တွေ့ရသည့် လက္ခဏာ (၇) ချက်ကို တင်ပြ သွားပါမည်။ ထိုလက္ခဏာများ မိမိတွင် ရှိနေလား စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ရှိနေသည် ဆိုလျှင် ဖယ်ရှား ပစ်ဖို့ ပြင် ဆင်ပါ။
၁။ ဘ၀ဆိုတာ ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းသည်ဟုသာ အမြဲ ခံယူထားသူ။
ပျော်ရွှင်သော လူများသည် ဘ၀ဆိုတာ ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းသည်ဟု နားလည်သည်။ သို့သော် တစ်ပြိုင်တည်း မှာပင် အခက်အခဲကို စူးစမ်းသည့် မျက်လုံးဖြင့် ကြည့်ကာ ပေါ့ပါး သွက်လက်သော စိတ်ဖြင့် ခုန်ပျံ ထွက် ရမည်ဟုလည်း ခံယူထားသူများ ဖြစ်သည်။ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းထဲသို့ သူတို့ မည်သို့ ကျရောက် ခဲ့ကြောင်း စူးစမ်းကာ ခုန်ထွက်နိုင်မည့် အခွင့်အရေး ကိုလည်း ရုန်းကန် ကြိုးပမ်းရင်း သတိမပြတ် စောင့် ကြည့် နေသူများ ဖြစ်သည်။
ပြဿနာ မပြေလည်မချင်း လက်မလျှော့ဘဲ ကြိုးပမ်းတတ်သည် မှာလည်း ပျော်ရွှင်သော လူသားများ သာ ဖြစ်သည်။ ဘ၀ဟူသည် ခရီးကြမ်း ဖြစ်သော်လည်း အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကျော်နိုင်သည့် ခရီးကြမ်း သာ ဖြစ်သည်ဟု ပျော်ရွှင်သူများက ခံယူကြသည်။
မပျော်ရွှင်သော လူသားများ ကားဘ၀ကို အရှုံးသမား အမြင်နဲ့သာ ကြည့်ကြသည်။ သူတို့ပေါ် ကျလာသည့် ဒုက္ခတွေကိုသာ စုပ်တသပ်သပ်နဲ့ ကြေကွဲ နေတတ်ကြသည်။ အခက်အခဲကြားက လွတ်အောင် ဘယ်လို ရုန်းရမလဲ လမ်းကြောင်းမရှာ၊ ခုန်ထွက်ဖို့ မကြိုးစားဘဲ ဘ၀ဆိုတာ ကြမ်းတမ်း သည်ဟုသာ ရေရွတ်ကာ ၀မ်းနည်းအား ပျက်နေတတ်ကြသည်။
၂။ လူတွေဆိုတာ မယုံရဘူးဟု ခံယူချက်ရှိသူ။
လူတွေကို သတိထားရမည် မှန်သော်လည်း လူတွေ အားလုံးသည် မယုံကြည်ရ ဟူသော အစွန်းတစ်ဖက် ထိ ရောက်သွားဖို့ မသင့်။ ပျော်ရွှင်သူများသည် သတိထားသင့် သူများကို သတိထားသော်လည်း လူအများစု ကြီးကိုကား ယုံကြည် စိတ်ချ ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းသင်းသူများ ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်သူများသည် လူတွေမှာ ရှိသည့် ကောင်းကွက်များကို ရွေးကြည့်ကာ ကျေနပ်ပီတိ ဖြစ်တတ်ကြသည်။ ကြုံလာ ဆုံလာရသူများကို ပွင့်လင်း နွေးထွေးစွာ ဆက်ဆံတတ်ကြသည်။ သူတို့နား ရောက်သည်နှင့် ချစ်ခင်ခြင်း ၀န်းကျင်ထဲ ရောက် သွားသလို ခံစားရသည်။ မိတ်သစ် ဆွေသစ်များကို ပွင့်လင်းသော နှလုံးသားဖြင့် ဆီးကြိုတတ်ကြသည်။
မပျော်ရွှင် နိုင်သူများကား လူအများစုကို မသင်္ကာ မျက်လုံးဖြင့် စိမ်းကားစွာ ကြည့်သည်။ လူစိမ်းတိုင်းကို မယုံရသူများ အဖြစ်သာ သဘောထားသည်။ ထိုအကျင့်ဆိုးသည် မိမိဝန်းကျင်မှာ ရှိထားပြီး သား လူများ လျော့သွားအောင် လုပ်သလို၊ မရသေးသော မိတ်သစ်များ တိုးလာမည့် အရေးကိုလည်း ဖျက်ဆီး ပစ်တော့သည်။
၃။ အဆိုးများ၊ အပျက်များကိုချည်း ရှာနေတတ်သူ။
မပျော်ရွှင်နိုင်သူများသည် ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာမှားနေ၊ လွဲနေလဲ ကိုသာ တစ်ချိန်လုံး စောင့်ကြည့် နေတတ် ကြသည်။ မှန်နေတာများကို မျက်နှာ လွှဲနေတတ်သည်။ အမှန်ကို မည်မျှပြောပြော လက်မခံချင်ကြ။ လုံးဝ မှန်နေသည့် ကိစ္စဆိုလျှင်ပင် “မှန်တော့ မှန်တာပေါ့၊ ဒါပေမယ့်..” ဆိုတာမျိုးနဲ့ အဆိုး တစ်ခုခု မရရအောင် ရှာဖွေပြောရမှ ကျေနပ်ကြသည်။
ပျော်ရွှင်သူများကား မိမိဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှကို သတိမူပြီး ကြည့်တတ်သည်။ အဆိုးကိုလည်း သင့်တင့်စွာ နှလုံးသွင်းတတ်သလို၊ အကောင်းကိုလည်း ရအောင် ရှာဖွေကြည့်ကာ ပီတိ ဖြစ်တတ်ကြ သည်။
၄။ တစ်ချိန်လုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကာ ကိုယ့်ထက်သာ သူကို မနာလို ဖြစ်တတ်သူ။
မပျော်ရွှင်နိုင် သူများသည် ကံကောင်းသူများကို မြင်လျှင် ထိုသူများ၏ ကံကောင်းသည် သူတို့ထံမှ ခိုးယူ သွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ခံယူတတ်ကြသည်။ မိမိထက်သာ သူများကို မနာလို ၀န်တိုစိတ်ဖြင့်သာ အသက် ရှင်သန်ကြသည်။ပျော်ရွှင်သူများမူကား ကံကောင်းသူများ၊ မိမိထက်သာ သူများကို မြင်လျှင် ထိုသူများထံက ဘာအတု ယူနိုင်မည်နည်းဟု အကောင်းဘက်က ကြည့်တတ် ကြသည်။ ပျော်ရွှင်မှု ဟူသည်သူများဆီ ကလည်း ခိုးယူလို့ မရသလို၊ မိမိထံ ကလည်းသူများ ခိုးယူလို့ မရနိုင်ကြောင်း ပျော်ရွှင် သူများ ခံယူထား တတ်ကြသည်။
ပျော်ရွှင်သူများက အဆုံးမဖြစ်သော ဖြစ်နိုင်စွမ်းများ အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိသည်။ အခြားသူ တစ်ယောက် ကောင်းစား ခြင်းကြောင့် မိမိအတွက် ထပ်ကောင်းစားရန် အခွင့်အလမ်း မကျန်တော့ ဆိုတာမျိုး ဘယ်တော့မှ မတွေး။
၅။ ဘ၀ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားသူ။
ကိုယ့် ကိုယ့်ကို ထိန်းချုပ်စီမံကာ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် ပေါက်မြောက်အောင် ကြိုးပမ်းခြင်းနဲ့ ဘ၀ကို ထိန်းချုပ်ထားဖို့ ကြိုးပမ်းခြင်း ကြားမှာ သိသိသာသာ ကွာခြားမှုရှိသည်။ ပျော်ရွှင်သူများသည် နေ့စဉ် ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များကို အရောက် လှမ်းကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မိမိသည် ဘ၀ကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း နည်းပါးလှကြောင်း ကိုလည်း နားလည်ကာ မှန်းထားသလို ဖြစ်မလာသည့် အခါများတွင် လည်းများစွာ ထိခိုက် ခံစားခြင်း မရှိဘဲလဲ ကျနေရာမှ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ပြန် တက်လျှောက်ကာ ဆက်လှမ်းသည်။
မပျော်ရွှင်သူများကား ရလဒ် အားလုံးကို သူတို့စိတ်ကြိုက် ဖြစ် လိုသည်။ မလွန်ဆန်နိုင်သော ၀န်းကျင် သက်ရောက်မှုများအတိုင်း မိမိလိုက်ပါ လှုပ်ရှားနေရသည့် အဖြစ်ကို သတိထားမိခြင်း မရှိကြ။ လိုချင်သော ရလဒ် ရရေးကိုသာ အာရုံစိုက်နေကြရာ ဘ၀က ခြေထိုး ခံလိုက်သည်နှင့် ဒလိမ့်ကောက်ကွေး ဖြစ်ကြ ရတော့သည်။ ဘ၀ဟူသည် ခရီးကြမ်းကြီး ဟူသော မပျော်နိုင်သူတို့၏ ခံယူချက်လည်း ပိုခိုင်မာသွားရသည်။
ပျော်ရွှင်သူများမူကား ဒလိမ့် ကောက်ကွေး ဖြစ်သွားသည့်တိုင် ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို မျက်ခြေမပြတ်။ ဘ၀ကိုလည်း စိတ်မပျက်။ ပြန်ထပြီး လျှောက်စရာရှိတာ စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ လျှောက်ကြသည်။
၆။ အနာဂတ်ကို စိုးရိမ်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ ကြည့်တတ်သူ။
လူသား၏ နားနှစ်ဘက်ကြားမှာ ပူပင်စရာတွေ ထည့်ဖို့ နေရာကျယ်ကြီး ရှိသည်။ သိပ်ကို ကျယ်သည်။ ပူပင်စရာ ဆိုလို့ကတော့ ထည့်ချင်သလောက်ထည့် ဆန့်သည် ဆိုတာမျိုး။ မပျော်ရွှင်နိုင် သူများသည် ဘာမှားလဲကိုသာ ဂရုစိုက် ကြည့်ကြသည်။ ဘာမှန်လဲကို မေ့ထားတတ်ကြသည်။
ပျော်ရွှင်သူများကား သူတို့ရှေ့ အနာဂတ်ကြီး သာယာစွာ ခင်းကျင်းလာမည်ကို ယုံကြည်ကြသည်။ မပျော်ရွှင်သူများသည် ခေါင်းထဲမှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုများနဲ့သာ ဖြည့်ထားကြသည်။ ပျော်ရွှင်သူများ သည်လည်း ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ စိုးရိမ် ပူပန်ခြင်း တို့ကို ခံစားရသည်ပဲ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပျော်ရွှင်သူများ သည် ကြောက်ရွံ့ခြင်း စိုးရိမ်ပူပန် ခြင်းတို့ကို ခံစားသည့်တိုင် ထိုအရာများနှင့် အတူ နေထိုင်ခြင်းတော့ မပြု။
ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ စိတ်ပူခြင်းများ ကျဆင်း သွားအောင်လုပ်ဖို့ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ ဆိုသော အဖြေကို ပျော်ရွှင် သူများက ရှာသည်။ ဘ၀သည် ကြမ်းတမ်းသောကြောင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ စိတ်ပူခြင်းများ ဟူသည် ရုန်းမလွတ်သော ထောင်ချောက် ဖြစ်သည်ဟု မပျော်ရွှင်နိုင် သူများက စိတ်ပျက် အားလျှော့ကြသည်။
၇။ အတင်းတွေ တုပ်သူ၊ အမြဲ ညူစူနေသူ။
မပျော်ရွှင်သူများသည် အတိတ်မှာ နေထိုင်သူများ ဖြစ်သည်။ ဘယ်တုန်းက ဘာတွေ ဒုက္ခရောက်ခဲ့သည်၊ ဘယ်တုန်းက ဘယ်လို အခက်အခဲ ကြုံခဲ့သည်များက သူတို့ ပြောစကားထဲမှာ အမြဲပြန်ပါ နေတတ်သည်။ သူတို့ အကြောင်း ပြောလို့ကုန်လျှင် အခြား သူများအကြောင်း ပြောမည်။ အတင်း အဖျင်းများလည်း ပါမည်။
ပျော်ရွှင်သူများကား ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေပြီး အနာဂတ် အတွက် အစီအစဉ်ချသူ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ လုပ်နေတာကို စိတ်ပျော်ရွှင် တက်ကြွနေသူ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ရထားတာ အတွက် ရောင့်ရဲ ကျေနပ်သည်။ အနာဂတ် အတွက် အိပ်မက်ပြီး ကျေနပ် ပျော်ရွှင်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသူဟူ၍ မရှိ။ လူတိုင်းအဆိုး ရေအိုင်ထဲမှာ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန် ကူးကြရသည်ပဲ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပျော်ရွှင်သူများက ရေကန်ထဲက ရုန်းတက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြသည်။ မပျော်ရွှင်သူများက ဘ၀က ကြမ်းသည်ဟု ၀မ်းနည်းကာ ရေနစ်ကြသည်။
ပျော်ရွှင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အရာရာမှာ ပြီးပြည့်စုံနေဖို့ မလို။ ပျော်ရွှင်စေသော အပြုအမူများ စိတ်နေ စိတ်ထားများ နေ့စဉ်ထားရှိ ကျင့်သုံးသွားဖို့သာ လိုသည်။
Ref:7Qualities Of People Who Are Chronically Unhappy (elitedaily.com)
ကိုမျိုး(သုတစွယ်စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook Page Twitter Google+
Friday, January 30, 2015 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
By မိုရ်မိုရ် (YUFEL)
သင်ဟာ မျက်နှာ တစ်ခုတည်းသာ အလေးပေးပြီး မျက်နှာအောက်က အသားအရေကို လျစ်လျူရှု ထားမိ ပါသလား။ လူတွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကား ပြောတဲ့အခါ မျက်နှာကိုသာ ကြည့်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သင့် လည် ပင်း နေရာကိုလည်း ကြည့်မိရင် ကြည့်မိ ကြပါလိမ့် မယ်။ မျက်နှာအရောင်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ လှပ သန့်ရှင်း တဲ့ လည်တိုင်လေး ပိုင်ဆိုင်ချင် ရင်တော့ ဖော်ပြ ထားတဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်း လမ်းလေးတွေကို လုပ်ဆောင် ကြည့်လိုက်ပါ။
၁။ နွားနို့ဖြင့် ချေးချွတ်ခြင်း
အဆင့် (၁)- လည်ပင်းကို နွားနို့နဲ့ သန့်စင်ပါ။ နွားနို့က အသားအရေကို သန့်စင်ပေးပြီး ဖြူဝင်းစေပါတယ်။
အဆင့် (၂)- ထို့နောက် သံလွင်ဆီ၊ သကြားနှင့် ရှောက်ရည် အရောနှင့် ချေးချွတ်ပါ။
အဆင့် (၃)- ရေဖြင့် ဆေးကြောပြီး အစိုဓာတ်ထိန်း ခရင်မ်လိမ်းပါ။
အထက်ပါ နည်းကို နေ့တိုင်း လုပ်ဆောင်ရင် နှစ်ပတ်အတွင်း သိသာ လာပါလိမ့်မယ်။ လည်ပင်း ကို ချေးချွတ် ပြီးပြီးချင်း နေရောင်ထဲ မထွက်ပါနှင့်။ အသားအရေကို ပိုပျက်စီး စေပါတယ်။ နောက်ပိုင်း နေပူ ထဲ ထွက်တိုင်း လည်ပင်းကို နေရောင်ကာ ခရင်မ် လိမ်းပေးတာက လည်ပင်း မည်းခြင်းကို သက်သာစေပါ တယ်။
၂။ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါကို အသုံးပြုခြင်း
မုန့်ဖုတ် ဆော်ဒါက သဘာဝချေး ချွတ်ဆေး ဖြစ်ပြီးတော့ လည်ပင်းပေါ်က အမည်းကွက်တွေကို ဖယ်ရှား ပေးနိုင်ပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ သုံးဆနဲ့ ရေတစ်ဆတို့ကို ခပ်ပျစ်ပျစ် ဖြစ်အောင်ရောပြီး လည်ပင်း မှာ လိမ်းပါ။ ခြောက်အောင် ထားပြီး ရေနှင့်ဆေးချပါ။ ဤနည်းကို တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ် လုပ်ဆောင်ပါ။
၃။ အသားအရေ ဖြူဝင်းလာစေဖို့ သခွားသီးကို သုံးပါ။
သခွားသီးမှာ အသားအရေ ချောမွေ့စေတဲ့ ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပါ တယ်။ ဆဲလ် အသေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို တောက်ပ စေပါတယ်။
- သခွားသီး အရည်ကို လည်ပင်း တစ်ခုလုံးကို လိမ်းပြီး ချေးချွတ်ပါ။ (၁၀) မိနစ်လောက် ထားပြီး ရေဖြင့်ဆေးပါ။ ဤနည်းကို နေ့စဉ် လုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။
- နောက်တစ်နည်း ကတော့ သခွားသီး အရည်နဲ့ ရှောက်ရည်ကို အညီအမျှရောပြီး ၀ါဂွမ်းလုံးလေးတွေကို အသုံးပြုပြီး လိမ်းပါ။ (၁၀) မိနစ်လောက်ထားပြီး ရေဆေးပါ။
၄။ လိမ္မော်ခွံကို အသုံးပြုခြင်း
လိမ္မော်သီးမှာပါတဲ့ ဗီတာမင် စီဓာတ်က အသားအရေကို သန့်စင်ပေးပြီး ပိုပြီး ဖြူဝင်းစေပါတယ်။
အဆင့် (၁)- လိမ္မော်ခွံ အချို့ကို အခြောက်ခံပါ။ အခွံများကို ဒီအတိုင်းသာ အခြောက်ထားပါ၊ နေရောင်နဲ့ အခြောက်မခံပါနဲ့၊ ဗီတာမင် စီဓာတ် ဆုံးရှုံးနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် (၂)- ထိုလိမ္မော်ခွံခြောက်များကို အမှုန့်ကြိတ်ပါ။ ထိုအမှုန့်များကို နွားနို့နှင့် ခပ်ပျစ်ပျစ်ရောပါ။
အဆင့် (၃)- လည်ပင်းတွင် လိမ်းပြီး (၁၅-၂၀) မိနစ်လောက် အခြောက်ခံပါ။ ထို့နောက် ရေဖြင့်ဆေးပါ။
၅။ ရှားစောင်းလက်ပပ်ကို သုံးခြင်း
ရှားစောင်းလက်ပပ် အရွက်မှ အနှစ်တွေကို ယူပါ။ လည်ပင်းတွင် လိမ်းပြီး မိနစ် (၂၀) ထားထားပါ။ ထို့နောက် ရေဆေးပါ။ ဒီနည်းကို နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
လူမှုဘ၀ သာယာမှုကို ထိခိုက် စေသော အကျင့်ဆိုးများ
လေ့လာမှု စစ်တမ်းများ အရ လူတစ်ယောက်သည် တစ်ရက်လျှင် ပျမ်းမျှ ခြောက်နာရီ ၀န်းကျင် ထိုင်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သွားရင်း လာရင်း ကား ပေါ် မှာ ရထားပေါ်မှာ ထိုင်ကြသည်။ အလုပ်ထဲ မှာလည်း ထိုင်ကြသည်။ တစ်နေကုန် လုပ်ကိုင်ပြီး အိမ်ရောက် တော့လည်း နားနား နေနေနဲ့ ထိုင်ဖြစ် ကြ ပြန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်သည် ထိုင်နေရ တာကို သဘာဝ အားဖြင့် ပိုသဘောကျပုံ ရသည်။ သို့သော် ထိုင်ပါ များခြင်းသည် ကျန်းမာရေး အား ဆိုးဝါးစွာ ထိခိုက် စေသည်ကို သတိပြု ရမည်။ အ၀ လွန်ခြင်း၊ ဆီးချို၊ စိတ်ကျရောဂါ၊ ကင်ဆာ၊ အရိုးပွ၊ ခုခံအား စနစ် အားနည်းခြင်း များသည် အထိုင် များခြင်း၊ မလှုပ်ရှားခြင်း တို့ကြောင့် အဓိက ဖြစ် ပွားကြောင်း လေ့လာမှု စစ်တမ်းများက ထောက်ပြနေ ကြပြီ။
အိပ်ရေးမ၀ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေသော တစ်ချက် ဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်ရင်း ညဉ့်နက်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနဲ့ အပြင် ထွက်ရင်း ညဉ့်နက်ခြင်း စသဖြင့် မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်ပဲ ညဉ့်နက်နက် မနက် အလုပ်သွားဖို့ ကုန်းရုန်း ထရပြီ ဆိုလျှင်တော့ အိပ်ပျက်ခြင်းဒဏ်ကို တစ်နေ့လုံး ခံရ တော့မည်။ အိပ်ချင် မူးတူး ဖြစ်နေ သဖြင့် အလုပ်များလည်း အဆင်မပြေ နိုင်တော့။ မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ် သည်လည်း လောင်စာ ပြည့်ပြည့်၀၀ မရသော ကားလိုပင် လိုရာ ခရီးရောက်မည် မဟုတ်။ ပုံမှန် လူ တစ်ယောက် အနေဖြင့် ပျမ်းမျှ အားဖြင့် တစ်ရက်ကို ခုနစ် နာရီခန့် အိပ်စက် သင့်သည်။ အိပ်ရေး မ၀ခြင်း သည် ရေတို ဖျားနာမှုအစ ရေရှည် သွေးတိုး၊ ဆီးချိုများထိ ဖြစ်ပွား နိုင်သည်။ အိပ်ရေးမ၀ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ပင်ပန်းနေသည့် အခါ နေ့စဉ် အလုပ်များ ကိုလည်း ထိခိုက်သည်၊ လုပ်ကိုင် နိုင်စွမ်းလည်း ကျဆင်းသည်၊ လုပ်လျှင်လည်း အမှားမှား အယွင်းယွင်းနှင့် မတော်တဆမှုက မကြာ မကြာ ဖြစ်ရသည်။
ကလေး ဆန်ဆန် လက်သည်းကိုက်ခြင်း
လက်သည်းကို ကိုက်မည်။ နှာခေါင်းကို နှိုက်မည်။ ပါးစပ်ထဲ နှိုက်မည်။ ထိုသို့သော အပြုအမူများသည် ကလေးဆန်ပြီး လူကြားထဲ တွင်လည်း သိက္ခာကျ စေသော ကိစ္စဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး အတွက်လည်း အကျင့်ဆိုး ဖြစ်သည်။ အားလုံး သိကြသည့် အတိုင်း လက်ဟူသည် နေရာတကာ လျှောက်ကိုင် သည်။ ဘက်တီးရီးယားတွေက အချိန်ပြည့် ကပ်နေ တတ်သည်။ ဆပ်ပြာနဲ့ နိုင်နိုင်ဆေး နိုင်ပါမှ တော်ကာ ကျသည်။ နှာခေါင်းထဲ ယားနေလို့ လက်နဲ့ တစ်ချက်လောက် ကလော် လိုက်ခြင်းမျိုး၊ သွားကြားထဲ အသားဖတ် လေးကပ်နေလို့ လက်သည်းလေးနဲ့ ထိုးထုတ်လိုက်ခြင်းမျိုးသည်ပင် လက်က ဘက်တီးရီးယား အများအပြား ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ၀င်သွားဖို့ တံတားထိုးပေး လိုက်ရာ ရောက်သည်။ လက်သည်း ကိုက်ခြင်းသည် လည်း အလားတူ ဖြစ်သည်။ လက်က ဘက်တီးရီးယားများ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ရောက်သွား နိုင်သည်။ ၀မ်းရောဂါ ကဲ့သို့ ရောဂါ များသည် မသန့်ရှင်းသော လက်မှ ဘက်တီးရီးယားများ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ရောက်သွားခြင်းက အများဆုံး ဖြစ်ပွားရသည်။ ထို့အပြင် နှာခေါင်း နှိုက်လိုက်၊ ပါးစပ် နှိုက်လိုက်၊ လက်သည်း ကိုက်လိုက် လုပ်နေခြင်းသည် စိတ်မရင့်ကျက်သူ တို့၏ လက္ခဏာ အဖြစ် သာမက စိတ်ဝေဒနာသည်တို့၏ လက္ခဏာ လည်း ဖြစ်တတ်သည်။
ဆေးလိပ် သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသည် ဟူသော စကားသည် ကြားရပါ များလွန်းလို့ ရိုးပင် နေလောက်ပြီ။ သို့သော် သွေးထွက်အောင် မှန်သော စကား ဖြစ်၏။ ဥပမာအားဖြင့် အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် ဆေးလိပ် သောက်သူ (၄၂) သန်း ရှိနေ သေးသည်။ ဆေးလိပ် သောက်သူ အရေ အတွက် ကျသထက် ကျလာနေသည့် အတွက်ကား ၀မ်းသာစရာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆက်သောက် နေဆဲ လူများ သတိထားမိ နိုင်ဖို့ ဆက်လက်ပြီး ပညာပေးနေရ ဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။ အဆုတ် ကင်ဆာ၊ ပါးစပ် ကင်ဆာ၊ အစာအိမ် ကင်ဆာ၊ ပန်ကရိယ ကင်ဆာ တို့သည် ဆေးလိပ် သောက်ခြင်းကြောင့် အဓိက ဖြစ် ပွားသည်။ ဆေးလိပ် သောက်ခြင်းသည် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ကိုလည်း တိုးပွား စေသည်။ ဆေး လိပ် သောက်သူ ကိုယ်တိုင် သာမက ဘေးလူများ ကိုပါ အလားတူ ဖြစ်ပွားစေ နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် ဆေး လိပ် သောက်ခြင်းသည် ငွေသိပ် ကုန်စေသော အကျင့်ဆုံးလည်း ဖြစ်သည်။ ဈေးခပ် ပေါပေါ ငါးဒေါ်လာ တန်ဘူးလောက် နေ့စဉ် သောက်မည် ဆိုလျှင်ပင် တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ (၁၈၀၀) ကျော် ကျသင့်သည်။
မနက်စာ စားခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆီဖြည့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မနက်မှာ ကလည်းက ဆီ လုံလောက်အောင် ဖြည့်ထားပါမှ ခန္ဓာကိုယ် ဟူသော ကားသည် တစ်နေကုန် ကောင်းကောင်း မောင်းနိုင် မည်။ သုတေသန စစ်တမ်းများ အရလည်း မနက်စာ ၀၀လင်လင် စားထားသူ များသည် အလုပ်ထဲ မှာ၊ ကျောင်းမှာ အခြားသူ များထက် ပိုကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်၊ လေ့လာ နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်က လုပ်ထားသော လေ့လာမှု စစ်တမ်းအရ လည်း မနက်စာ လွတ်သူသည် မလွတ်သူများ နဲ့ ယှဉ်ပါက နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ (၂၇) ရာခိုင်နှုန်း ပိုများကြောင်း လေ့လာ တွေ့ရှိထား သည်။
လူမှုဘ၀ သာယာမှုကို ထိခိုက်စေသော နောက်ထပ် အကျင့်ဆိုး တစ်ခုမှာ သုံးဖြုန်းလွန်းခြင်း ဖြစ် သည်။ ရှောပင်းစင်တာများ ပေါများလာသော ယနေ့အချိန်တွင် သုံးဖြုန်း ကျင့်ရှိသူ အဖို့ ရှောပင်း စင်တာထဲ ၀င်သွားသည်နှင့် တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုက ပါလာနိုင်သည်။ ခရတ်ဒစ်ကတ်များ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် သုံးနေသော နိုင်ငံ များတွင် ပိုဆိုးသည်။ ငွေကိုင် ၀ယ်စရာ မလိုသဖြင့် ကတ်ကလေး ထိုးထိုးပြီး သုံးလိုက်ရာ လကုန် စာရင်းချုပ်မှ နောင်တရ ကြရသည်။ သုံးဖြုန်းခြင်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရလည်း စွဲလွယ်သည်။ အသစ် အသစ်များ ၀ယ်လာခြင်းဖြင့် ပျင်းစရာ တစ်နေ့တာ ဘ၀ကို အသစ်နဲ့ ဖြည့်ကာ ခဏတာ လန်းဆန်းစေမှုကို လူတွေ စွဲလန်းတတ် ကြသည်။ ငွေသုံးလိုက် နိုင်ခြင်းကြောင့်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တယ်ဟုတ်ပါလားဟု စိတ်ကြီး ၀င်ကာ ကျေနပ်ရသည့် ခံစားချက်ကို စွဲပြီး သုံးဖြုန်းလိုက် နောင်တရလိုက် သံသရာက မထွက်နိုင်ဖြစ်ရ တတ်သည်။
သီချင်း ကျယ်ကျယ် နားထောင်ခြင်း။
အသံခပ် တိုးတိုးနဲ့ အကြာကြီး ကြားနေရခြင်းသည်လည်း နားကို ဒုက္ခပေးတတ် သလို၊ အသံကျယ်ကျယ်ကို ခဏလောက် မခံသာအောင် ကြားရ ခြင်းသည်လည်း နားကို ဒုက္ခပေး တတ်သည်။ ထိုသို့ တိုးတိုးနဲ့ ကြာကြာအသံ ဒုက္ခပေးခြင်း၊ ခဏတဖြုတ် ဖြစ်သော်လည်း ကျယ်လောင်စွာ ဒုက္ခ ပေးခြင်း များကြောင့် အကြား အာရုံ ချို့ယွင်းရသူ အသက် (၂၀) မှ (၆၉) ကြားက အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် (၁၅) ရာခိုင်နှုန်း ရှိ သည်။ တစ်ချက် တစ်ချက် ကျယ်လောင်စွာ ကြားရသည့် အသံမျိုးသည် အကြားအာရုံ ထိခိုက်စေသည့် အဓိက အချက် ဖြစ်သည်။ (၈၅) ဒက်စီဘယ် (ကားဟွန်း သံခန့်) နှင့်အထက် ဆိုလျှင် နားကို ဒုက္ခပေးတော့ မည်။ နှစ်ပေ သုံးပေ လောက်သာ ကွာသောလူကို အော်ပြောနေရ လောက်အောင် နှောင့်ယှက်သော အသံမျိုး ဖြစ်ပါက (၈၅) ဒက်စီဘယ်ထက် ကျော်ပြီဟု သတ်မှတ် နိုင်သည်။ နားကြပ်ဖြင့် သီချင်းသံ အကျယ်ကြီး ဖွင့်ကာ နားထော်ခြင်းသည်လည်း အကြား အာရုံ ထိခိုက် စေသော အချက် ဖြစ်သည်။
ဖုန်းစွဲခြင်းသည် လူကို စိတ်အနားမရ စေသော အဓိက တစ်ချက် ဖြစ်သည်။ အနားမရသော စိတ်သည် ပင်ပန်းကာ လုပ်ကိုင် နိုင်စွမ်း ကျဆင်းသည်။ စမတ်ဖုန်းများ၏ အချက်ပေး စနစ်များက ထိုပြဿနာကို ပိုဆိုး စေ သည်။ မိမိက ဖုန်းကို မဖွင့်လျှင်ပင် အကြောင်း တစ်ခုခု ၀င်လာသည်နှင့် ဖုန်းက တီတီ တောင်တောင်နဲ့ အချက်ပေး တော့သည်။ ထိုအခါ ကိုယ်ကလည်း မနေနိုင်၊ ကောက်ကိုင်ရ တော့သည်။ ကြာလာတော့ အကျင့် ဖြစ်လာသည်။ ဖုန်းက အသံ နည်းနည်း ထွက်လာသည်နှင့် လက်က ကောက်ကိုင်ပြီးသား ဖြစ်နေ သည်။ ထိုအကျင့်သည် နေ့စဉ်ဘ၀ အနှစ်သာရ များကို ဖျက်ဆီးပစ်သည်။ အလုပ်တစ်ခုကို ကိုယ်က အာရုံစိုက် လုပ်နေစဉ် ဖုန်းက မြည်လာသော အချက် ပေးသံကြောင့် အာရုံပျက်ကာ အလုပ်မှာလည်း ဆက်ပြီး အားမစိုက် ဖြစ်တော့။ သူငယ်ချင်းနဲ့၊ မိသားစုဝင်များနဲ့ စကားပြောနေလျှင်လည်း ဖုန်းအချက်ပေး သံ မြည်လာလို့ ကောက်ကိုင်သဖြင့် စကား အရှိန်ပျက် ရသည်။
Ref: Common Bad Habits And How To Break Them (yahoo.com)
Friday, January 30, 2015 ပညာရေး
Written by ခင်မောင်ဌေး (ပညာရေး)
အခြေခံပညာအဆင့် (မူလတန်း+အလယ်တန်း) မှာ သိသာတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အနေနဲ့ စာမေးပွဲစစ် ဆေး တဲ့ ပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းပါ။ အဲဒါကတော့ စတုတ္ထတန်း စာမေးပွဲကို ခရိုင်စစ်နဲ့ အဋ္ဌမတန်းစာမေး ပွဲကို တိုင်းဒေသကြီး (ဝါ) ပြည်နယ်အဆင့် စစ်ဆေးခြင်းပါပဲ။
အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ ကလေးတွေရဲ့ အရည်အချင်း တိုးမြင့်လာစေဖို့ပါ။ မူလတန်းအဆင့်မှာ စတုတ္ထတန်းနဲ့ အလယ်တန်း အဆင့်မှာ အဋ္ဌမတန်းပါ။ အရင်ကတော့ ကျောင်းတွင်းစစ် စာမေးပွဲအဖြစ် စစ်ဆေးနေတာပါ။ ခုဟာကတော့ အုပ်စုဖွဲ့စစ်လိုက်တဲ့သဘောပါ။ အစိုးရစစ်စာမေးပွဲလို့တော့ ခေါ်ရ မယ်မထင်ပါဘူး။ အခြေခံပညာ အထက်တန်း (တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း) တစ်ခုကိုပဲ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း အတာနဲ့ အစိုးရက တာဝန်ယူ စစ်နေတာပါ။
တစ်ခုရှိတာက မိဘတွေရဲ့အတွေးထဲမှာ အစိုးရစစ်တာဝန်ယူစစ်နေတာပါ။ အတွေးကြီးဝင်နေတယ်။ ပြီးတော့လောဘကြီးတဲ့ မိဘတွေကလည်း အများသား။ ဒီတော့အဲဒီဒဏ်ကို အများဆုံးခံရတာက ကလေးတွေပဲ။ အဲဒီကလေးတွေ စာကြည့်နေရတဲ့ပုံက သာမန်အဆင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူထက်တောင် သာလွန်နေပါသေးတယ်။
စာရေးသူရဲ့အိမ်မှာ မြေးဖြစ်သူကလည်း စတုတ္ထတန်းဖြေမှာ ဆိုတော့ စတုတ္ထတန်း စာမေးပွဲဂယက်က အိမ်မှာ အတော်ကလေး ရိုက်ခတ်နေပါတယ်။ မိဘက တအားဖြစ်ချင်၊ ဖြစ်ချင်သလောက် ကလေးက မလိုက်နိုင်တဲ့အခါ ဆူကြပူကြ၊ ငိုကြယိုကြပေါ့။
ပါမောက္ခဆရာကြီး ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ရဲ့ ဆီမီနာတစ်ခုမှာ ဟောပြောသွားတာကို သွားသတိ ရမိတယ်။ အဲဒါကဘာလဲဆိုတော့ ကလေးကို EQ မြင့်အောင်သင်ပေးလို့ရတယ်။ IQ မြင့်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကလည်း IQ မြင့်နေရမှာတဲ့။ ကလေးကိုညံ့တယ်။ ညံ့တယ်ပြောရင် “ငါညံ့တာပဲ ငါညံ့တာပဲ” လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြောနေသလိုပဲ” မှတ်ပါတဲ့။
နောက်ဒီအရွယ်ကလေးတွေက ကစားမက်တဲ့အရွယ်၊ အဲဒါကိုနားမလည်ဘဲ စာပဲတစ်နေကုန်သင်နေ လို့ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ စာသင်ချိန် ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကလေးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုက လျော့ကျသွားနိုင် တယ်။ ကလေးကိုငြိမ်ငြိမ်နေခိုင်း၊ မလှုပ်စေရဘဲ တစ်ချိန်လုံး စာသင်နေလို့ ဘယ်လိုမှကိုမရပါဘူး။ တစ် နေ့ ကတော့ ပညာရေးဂျာနယ် (Education Digest) မှာကလေးတွေကို လှုပ်ရှားမှုပြုရင်း စာသင်စာ ကျက် လုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်း၊ ကလေးရဲ့ အာရုံနှိုးဆွမှုကို ပိုပေးနိုင်ကြောင်း၊ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီလို အကျိုး အကြောင်းပြောပြမှ ကလေးလှုပ်ရှားခွင့် ရသွားတယ်။
ဆိုလိုတာကတော့ နားချိန်၊ ကစားချိန်၊ စားချိန်နဲ့ စာကြည့်ချိန်ကို အကန့်အသတ်လေးနဲ့ လုပ်ပေးနိုင် ရင် ကောင်းမှာပါ။ ဖြစ်ချင်ဇောနဲ့ မနားမနေ စာကျက်ခိုင်းတာ၊ ဂိုက်တွေငှားပြီးသင်တာ၊ Camp သွင်း တာ တွေဟာ ရေတိုမှာတော့ ကလေးအနေနဲ့ စာမေးပွဲဖြေနိုင်ကောင်းဖြေနိုင် ပါလိမ့်မယ်။ အမှတ်ကောင်း ချင် ကောင်းပါ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်အတွက်တော့ ကောင်းလှမယ် မထင်ပါဘူး။
ခုခါမှာ ပညာရေးစနစ်က တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနေပါပြီ။ စနစ်ဟောင်းမှာ စာမေးပွဲရမှတ်နဲ့ အဆုံးအ ဖြတ်ပေးတာမို့ အမှတ်ကောင်းဖို့ တစ်ခုတည်းကြည့်ပြီး ကြိုးစားနေကြတာပါ။ ရမှတ်ကောင်းတိုင်း IQ မြင့်တယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ သုတေသနပြုချက်တွေ အရဆိုရင် IQ မြင့်သူထက် EQ မြင့်သူတွေတောင် ပိုပြီးအောင်မြင်နေတာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ကလေးတွေကို စာမေးပွဲ ရမှတ်တစ်ခုတည်း မြင့်မားရေးကိုပဲ ကြည့်နေကြရင် (One Way) တစ် လမ်းသွား ပညာရေးပဲဖြစ်နေမှာပါ။ အားကစား လုပ်ဖို့အားမပေး၊ အပြင်စာဖတ်ဖို့ အချိန်မရ၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ အခွင့်အလမ်း မရှိ၊ ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဘက်စုံထူးချွန်ဖို့ ခက်ခဲလာပါလိမ့်မယ်။
မကြာခင် ပညာသင်နှစ်တွေမှာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အဲဒီကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူတွေရဲ့ ပကတိတည်ရှိနေတဲ့ အရည်အသွေး၊ အရည်အချင်းတွေပေါ်မှာ မူတည်လာတော့ မှာပါ။ စာမေးပွဲ ရမှတ် တစ်ခုတည်းအပေါ် အခြေခံ စဉ်းစားလာရာကနေ ဝင်ခွင့်ခေါ်တဲ့ မိမိရဲ့ပင်ကို အရည်အသွေးနဲ့ စစ်ဆေး အစမ်းသပ်ခံပြီး ရွေးချယ်ခံရမယ့် တက္ကသိုလ်ပညာရေး ဆိုတာလည်း ပေါ်လာ မှာပါ။
ဒီနှစ်ကစပြီး စတုတ္ထတန်းနဲ့ အဋ္ဌမတန်းစာမေးပွဲ စစ်ဆေးတဲ့စနစ်ကို ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ စိုးရိမ်စရာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ အခွင့်အရေး ရှိပါတယ်။ အောင်/ရှုံးကို အဆင့်ခွဲထားပေးပါတယ်။ တော်၊ သင့်၊ ညံ့အ လိုက် A,B,C,D အဆင့်ခွဲတွေခွဲပေးမှာပါ။ အမှတ် (၈၀) နဲ့ (၁၀၀) ကြားက A အဆင့်၊ (၆၀) နဲ့ (၈၀) ကြားက B အဆင့်၊ (၄၀) နဲ့ (၆၀) ကြားက C အဆင့်နဲ့ D ကတော့ ကျရှုံးအဆင့်ပေါ့။ တကယ်လို့ကျ ရှုံးအဆင့်ဖြစ်နေ ရင်တောင် ‘ကုစား’ ရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုမှ ကယ်တင်လို့မရမှ ကျရှုံးစာရင်းဖြစ်သွား မှာပါ။
မိဘတွေ အနေနဲ့တော့ CAP စနစ်ဆိုတာက စဉ်ဆက်မပြတ် အကဲဖြတ်၍ အတန်းတင်ပေးတဲ့ စနစ်ပါ။ အဲဒီစနစ်မှာလည်း ‘ကုစား’ ရှိပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ကျရှုံးသူမရှိတဲ့ စနစ်ပါ။ တစ်နှစ်တစ်တန်း အောင် လာသူတွေ တိုးတက် လာတာတော့ အမှန်ပဲ။ အရေအတွက်အားဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။
ခုစနစ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ အဆင့်ခွဲပေးမယ့် ‘ကုစား’ ရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် လုံးဝအဆင့် မမီသူအတွက် ‘အကျ အရှုံး’ ရှိမယ်ဆိုတာပါ။ ဆိုလိုတာက ဖြေဆိုသူအားလုံး မအောင်မြင်နိုင်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ဒါဟာ စာမေးပွဲ တစ်ခုရဲ့ စံနှုန်းတစ်ခုပါ။
ဒီတော့ မိဘတွေအနေနဲ့ အလွန်အကြူးမစိုးရိမ်ကြဖို့၊ မပြုမူမိကြဖို့ လိုပါတယ်။ ပညာ ဆိုတာငွေကြေး ပြည့်စုံတိုင်း၊ တတ်နိုင်တိုင်းရနိုင်တဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေမှာ ပင်ကိုရှိနေတဲ့ IQ နဲ့လိုက်ဖက် အောင် သင်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ပိုင်း (Mental) နဲ့ရုပ်ပိုင်း (Physical) မျှမျှတတ ဖွံ့ဖြိုး လာဖို့လိုပါ တယ်။ အဲဒီလို ပြုစုပျိုးထောင်လာနိုင်မယ်ဆိုရင် အဆင့်မြင့်ပညာရပ်တွေ လေ့လာ ဆည်းပူး ရတဲ့အရွယ် အထိ အကျိုးများနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ စာမေးပွဲစနစ်တစ်ခုကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ပကတိရှိနေတဲ့အခြေအနေ မှန်ကို သိမြင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ခုဆိုဒီဇင်ဘာလအတွင်း စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ ရမှတ်တွေ၊ အဆင့်တွေထွက်ပေါ် လာတော့မှာပါ။ အဲဒီရလဒ်တွေပေါ်ကြည့်ပြီး ကလေးတွေရဲ့ အခြေအနေ၊ စာမေးပွဲမေးခွန်းပုံစံ၊ ပြဋ္ဌာန်း စာအနည်းအများစတာတွေကို မှန်းဆနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်စိတ်ပူပန်သောကများစွာနဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေလိုပါဘူး။ ကလေးတွေအတွက် စာမေးပွဲဆို တာကို ကြောက်စရာအဖြစ်မမြင်သွားစေလိုပါဘူး။ ကလေးတွေအပေါ် ဖိအားထွန်းအားတွေ အများ ကြီးမဖြစ်စေပါနဲ့။ စာမေးပွဲဆိုတာ ပိုမိုကြိုးစားလိုစိတ်၊ မိမိကိုယ်တိုင် သိကျွမ်းနားလည်လာအောင် သင် ယူလိုစိတ်၊ မိမိကိုယ်မိမိ အားကိုးလိုစိတ်တွေ ရှင်သန်တိုးပွားလာအောင် ပြုပြင်ပေးတဲ့စနစ်လို့သာ မြင် ကြရင်သင့်မြတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဇန်နဝါရီလ (၁၁) ရက်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
အများသုံးအိမ်သာကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် ဘယ်လို သုံးသင့်သလဲ
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်မှာတော့ အများသုံး အိမ်သာ သုံးဖို့ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ရောဂါ ပိုးမွှားရန်က ဝေးစေဖို့ လုပ်ဆောင် နိုင်တာလေးတချို့ကို အကြံပြုလို ပါတယ်။
သုတ်စရာ အဝတ်တစ်ရှူး ဒါမှမဟုတ် စက္ကူတစ်ရှူးနဲ့ အိမ်သာပေါ် မထိုင်မီ သုတ်တာမျိုးလုပ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခုံမှာ ထိုင်ပြီးရင် အဝတ်အစားတွေကို ကြမ်းပြင် အထိကျအောင် မလုပ်သင့် ပါဘူး။ အိမ်သာကြမ်းခင်းမှာ မမြင်နိုင်တဲ့ ပိုးမွှားများစွာ ရှိနေ တာကြောင့် ကပ်ငြိလာနိုင်ပါတယ်။
ရေဆွဲချရာမှာလည်း လက်နဲ့ တိုက်ရိုက်ကိုင်တာထက် တစ်ရှူး နဲ့ကိုင်တာမျိုး၊ ခြေထောက်သုံးပြီး ဆွဲချတာမျိုး၊ တံခါး လက်ကိုင်တွေ ကိုလည်း တစ်ရှူးနဲ့ကိုင်ဖွင့်တာ မျိုးလုပ်နိုင် ပါတယ်။
အိမ်သာဆိုတာမျိုးက အမြဲ တမ်းရေတစိုစိုဖြစ်နေတာမို့ ဘက် တီးရီးယားတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ ကပ်ပါ လာနိုင်တာကြောင့် လက် ဆေးဖို့ကိုတော့ လုံးဝမမေ့သင့်ပါ ဘူး။ လက်ဆေးတဲ့ အခါမှာလည်း အော်တိုရေ ပိုက်ခေါင်းတွေဆိုရင် လက်ဖယ်လိုက်တာနဲ့ ပိတ်သွား ပေမယ့် ရိုးရိုးရေပိုက်ခေါင်းဆိုရင် တော့ တစ်ရှူးသုံးပြီး ပိတ်တာမျိုး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်က တော့ အိမ်သာက ထွက်လာပြီးတိုင်း လက်ဆေးလာသော်ငြားလည်း လက်သန့်ဆေးရည်လေးနဲ့ ထပ်ပြီး ပွတ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါ တယ်။ အိမ်သာတိုင်း မသန့်ရှင်းဘူးလို့ မဆိုနိုင်ပေမယ့် ဆီးလမ်း ကြောင်းပိုးဝင်ပြီး ကျောက်ကပ် အထိပါဒုက္ခပေးနိုင်တာကြောင့် မမြင်နိုင်တဲ့ ပိုးမွှားအန္တရာယ်က ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်အောင် အိမ် သာထဲဝင်တာနဲ့ ရေပိုက်၊ အိမ်သာ တံခါး၊ ရေဆွဲခလုတ်စတာ တွေကို လက်နဲ့တိုက်ရိုက်မထိ ကိုင်မိဖို့သတိပြုကြရအောင်ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားသူတွေအနေ နဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေ စားရုံသာမက လေ့ကျင့်ခန်းလည်း ပုံမှန်လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ် တယ်ဆိုတာ သိထားကြပါတယ်။ အစာစား ရုံ၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရုံသာမက အဆီတွေ ကို မြန်မြန်လောင် ကျွမ်းစေနိုင်တဲ့ သောက်စရာတွေ မှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင် ဖို့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေခဲရေဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဇီဝဖြစ်စဉ် လုပ်ငန်းစဉ်များကို မြှင့် တင်ပေးနိုင်တာကြောင့် ကယ်လိုရီပမာဏ များနေတာတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ နေ့တိုင်းရေခဲ ရေအနည်းဆုံး ၁၆ အောင်စ လောက်သောက်ရင် ထူးခြားတဲ့ ရလဒ်တွေ့ရမှာပါ။
အခြားသောဖျော်ရည်တွေထက် လျှပ်လိုက်ရည် (အီလက်ထရိုလိုက်) များများ ပါဝင်တာကြောင့် ရေဓာတ် အမြဲပြည့်ဝနေ စေပါတယ်။ အုန်းရည်ထဲကို သကြားနဲ့ အခြားအရသာတုတွေ မထည့်ဘဲ သောက်သင့်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ စွမ်းအင်ပြည့် ဝနေဖို့ထောက်ကူပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆီတွေ မြန်မြန်ချေဖျက်ရာမှာ အကျိုးပြု တာကြောင့် အဆီထုတ်နွားနို့ ပုံမှန်သောက်ပြီး ဘာတွေထူးခြားလဲ စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးပြုရုံသာမက ကယ်လိုရီပမာဏ များနေတာတွေကို လည်း လျှော့ချပေးနိုင် ပါတယ်။
ဈေးကွက်ထဲမှာ အသင့် ရောင်းချတဲ့ အာဟာရဖျော်ရည် တွေကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျန်း မာရေးအတွက် အထောက်အကူ ပြုပေမယ့် ကိုယ်ရွေးချယ်သောက် တဲ့ဖျော်ရည်က သင့်လျော်မှုရှိ၊ မရှိကိုတော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင် သင့်ပါတယ်။
အဆီဓာတ်ကို ၄၃ ရာခိုင် နှုန်းဖယ်ရှားပေးတာကြောင့် ပိန်ပိန်ပါးပါးဖြစ်လို သူတွေကတော့ ပုံမှန်သောက်သင့် ပါတယ်။
ဗိုက်ချပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် သကြားမထည့်ဘဲ သဘာဝ အတိုင်းသောက်ဖို့တော့လိုပါ တယ်။ ကယ်လိုရီ ကိုလျော့ကျစေ ပြီး ရေဓာတ်ကို အမြဲပြည့်ဝနေစေ ပါတယ်။
တကယ်တမ်းတွင် ပြဿနာ က ဘာမျှကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် မဟုတ်။ အေမီချိုက ၎င်း၏ ခင်ပွန်း ကလေးပုခက်လွှဲပြီး ဟင်းချက်နေသည့် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို သူငယ်ချင်းများ ကိုပြချင် သည့်စိတ်၊ အိမ်အလုပ်များ ကူလုပ်ပေးသည့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကို ကြွားဝါချင်စိတ်ဖြင့်သာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ် တင်လိုက်ခြင်းဖြစ် ပါသည်။ သို့သော် အေမီချိုမေ့လျော့နေသည့် အချက်ကား ၎င်း၏ များပြား လှစွာသောဖေ့စ်ဘွတ်ခ် သူငယ်ချင်းများ ထဲတွင် ၎င်း၏ယောက္ခမကြီးလည်း ပါဝင်နေသည် ဆိုသည့် အချက်ဖြစ် သည်။ ပြဿနာကား အေမီချို တင်ထားသော ဓာတ်ပုံအောက်မှာ ယောက္ခမကြီးက အောက်ပါအတိုင်း ကွန်မန့် (ခေါ်)မှတ်ချက် တစ်ခုရေးရာမှ စတင်တော့သည်။
‘ယောက်ျားကို အိမ်အလုပ်တွေ မတရားခိုင်းတာ အမျိုးကောင်း သမီး မဟုတ်ဘူး’
ထိုမှတ်ချက်ကို ဖတ်လိုက် ရသောအခါ အေမီချို သွေးဆူသွားသည်။ အေမီချို့ထက် ပို သွေးဆူသည် ကား အေမီချို၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် သူငယ်ချင်းထဲမှာရှိနေသည့် မိခင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ဓာတ်ပုံအောက်က အေမီချို၏ယောက္ခမမှတ်ချက်ကိုမြင်နေရသည်။ ခမည်းခမက်တော်သူက သမီးကို အမျိုးကောင်းသမီး မဟုတ်ဟုဆိုသော စကားက သူ့ကိုပါတိုက်ရိုက် သက်ရောက်နေသည် မဟုတ်ပါ လား။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင် ခမည်းခမက်များ အပြန်အလှန် စကားစစ်ပွဲနွှဲကြ၏။ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် အမျိုးများ၊ မိတ်ဆွေများက လိုက်ခ်(like)များနှိပ်ကာ အားပေးကြ၏။ ကွန်မန့်မှတ်ချက်ပေါင်း ၂၀ကျော် အပြန်အလှန်ရေးအပြီးမှာတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြန်အလှန်ဘလော့ဂ်ပြီး ပွဲသိမ်းလိုက် ကြ၏။ အပြင်မှာလည်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စကားမပြောကြတော့။
အေမီချိုတို့ သားအမိသာမဟုတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်လာပြီး ကတည်းက သတင်း၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးများအတွက် အကျိုးရှိ စွာ အသုံးချနေကြသူများရှိသလို အပြင်မှာ ဘာမှမဖြစ် ဘဲ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်လာခါမှ အငြင်းပွား ပြဿနာများတက်ကာ မခေါ်နိုင် မပြောနိုင်သူများ အများကြီးရှိလာပါ သည်။ ထို့အတူ နေ့စဉ်ဘဝ မှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အတွက် အတော်များများ အချိန်ပေး လာသူတွေလည်း အများအပြား တိုးလာနေပါသည်။
၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အင်တာနက်စာမျက် နှာတစ်နာရီလောက်ပြတ်တောက် သွားခဲ့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ သုံးစွဲသူများ အပါအ၀င် နိုင်ငံအများအပြားက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပရိသတ် များ ပွက်လောရိုက် ဆူညံသွားခဲ့သည်။
သည်အရာက သိပ်တော့ထူး ဆန်းသည့် အချက်မဟုတ်။ Forbes မဂ္ဂဇင်း၏ပြောကြားချက် အရ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် သည် ကမ္ဘာပေါ်မှလူများအတွက် အကြီးဆုံးလူမှုရေး ကွန်ရက်အင်တာနက် စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဟု ဆိုပါသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်က အခြားနိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်ပါက ကမ္ဘာပေါ် တွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အင်တာနက် စာမျက်နှာသုံးစွဲသူ အနည်းဆုံးနိုင်ငံများ၌ ရှိနေပါသေးသည်။
လက်ရှိပြုစုထားသည့် စာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် သုံးစွဲသည့်အရေအတွက်မှာ လေးသန်း နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်များအရ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် အသုံးပြုသူလူပေါင်း သန်း တစ်ထောင့်နှစ်ရာအထိပင် ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုအရွယ်စုံ၊ လူမျိုးစုံအသုံးပြုလာကြပြီး သုံးသူများထဲမှာ အမေရိ ကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် တွင်နေသည့် အသက် (၁၀၇)နှစ်ရှိနေသည့် အဘွားတစ်ဦးပင်ပါဝင်သည်။ ကမ္ဘာမှာ အသက်အကြီးဆုံးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူဟုပြောကြသည့် အဆိုပါ အဘွား၏အမည်မှာ အက်ဒီသီကီရာမိုင်ရာ (EdytheKirchmaier) ဖြစ်ပြီး ၎င်းက ချီကာဂိုတက္ကသိုလ် မှ ကျောင်းသူဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အသက်ကြီးသူ ဆိုသော်လည်း ခေသူတော့ မဟုတ်။
၎င်း၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ ၌ သူတင်သမျှကို ပုံမှန်လာဖတ် သူပေါင်း ငါးသောင်းကျော်ရှိသည်ဟုသိရ၏။ ထိုကဲ့သို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် သုံးစွဲသူတွေက လူကြီးကနေ ကလေးအထိ အရွယ်စုံ ကဲ့သို့ ဖြစ်လာသောပြဿနာ များကလည်း နေရာမျိုးစုံ၊ ပုံစံမျိုးစုံ ဒုနှင့်ဒေးဖြစ်လာပါသည်။ ရန်ကုန် ကအေမီချိုတို့လို မိသားစုပြဿနာ တင်မက နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြဿနာများအထိပင် ပါဝင်ပါသည်။
ထိုအထဲတွင် မြောက်ပိုင်း အင်္ဂလန်မှ အသက် (၁၄)နှစ် အရွယ်ကျောင်းသားလေးဂျော်ဒန် ဖို့ဒ်ဆို သူမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကြောင့် အထက်တန်းကျောင်းကနေပါ ထွက်ခဲ့ရသည်အထိ ပြဿနာတက်ခဲ့ ရသည်။ ဂျော်ဒန်ဖို့ဒ်က ဆယ်ကျော်သက်ပီပီ ခေါင်းကို ဆံပင်အနီရောင်ဆိုးသည်။ ၎င်းတို့ ကျောင်းက ဆံပင်အနီကို အခြားသာမန်အရောင်ပြောင်းခိုင်း၏။
ဂျော်ဒန်က မကျေနပ်ပါ။ တစ်နေ့တွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်၌ ၎င်းတို့ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီး၏ ဓာတ်ပုံကို သွားတွေ့၏။ ဆရာမကြီးက ဆံပင်ကို ခရမ်းရောင်ဆိုးထားသည်။ ဆရာမကြီးက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ အဟန့်အတားများနှင့် ကိုယ့်ပုံများကို မဆိုင်သူများမမြင်အောင်လုပ်ရသည့် သဘောကိုနားမလည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏ပုံကို ဂျော်ဒန်က အလွယ်တကူ ကူးယူသွား၏။
ထို့နောက် ဆရာမကြီးပုံ အောက်မှာ ဂျော်ဒန်က ပုံစံမျိုးစုံ ဖြင့် ဆရာမကြီး၏ဆံပင်အရောင်၊ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင် ရာများကို လှောင်စာ၊ ပြောင်စာ တွေမျိုးစုံအောင်ရေးပြီး ဖေ့စ် ဘွတ်ခ်၌ပြန်တင်သည်။ အခြား ကျောင်းသားများကပါ ဝင်ရေး ကြ၊ ဝင်ဟားကြ၏။ ဆရာမကြီးလည်း အရှက်ကြီးစွာရခဲ့၏။ ထို အချက်ကြောင့် ၎င်းကိုကျောင်းကထုတ်ပယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။
ဂျော်ဒန်၏ဖခင်က ယင်းအဖြစ်အပျက်ကို အင်္ဂလန်တယ် လီဂရပ်ဖ်သတင်းစာကိုပြောကြား ရာတွင်သူ၏ သားမှာ လူပြောင်ဖြစ်ပြီးဆရာမကြီးကို စနောက်ခြင်း သာဖြစ်ပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။
သို့ရာတွင် ကျောင်းအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့က ဂျော်ဒန်၏အပြုအမူ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် လူမှု ရေးဆိုရှယ် မီဒီယာစည်းကမ်းများ ကိုဖောက်ဖျက်နေသည်ဟုဆိုပါ သည်။
‘‘ဂျော်ဒန်နဲ့မိဘတွေက ကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ ဆိုရှယ် မီဒီယာကို ဘယ်လို သုံးရမလဲဆို တာ ကျောင်းအပ် ကတည်းက လက်မှတ်ထိုးပြီးသားပါ။ ကိုယ့် အချိန်ကို ကိုယ်သုံးပြီး လုပ်တယ်ဆိုပေမယ့် တခြားသူတွေရဲ့ ကိုယ် ပိုင်စာမျက်နှာကို ကျူးကျော် ဓာတ်ပုံကူးချပြီး အဲဒီလိုလုပ်တာကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး’’ ဟု ကျောင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဝေဖန်သည်။
ယင်းအဖြစ်အပျက်မှာ ဖေ့စ် ဘွတ်ခ်ကြောင့်ဖြစ်ပွား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် မရှိမီက ဂျော်ဒန် ကဲ့သို့ကျောင်းသားကလေး တွေက ကျောင်းဆင်းလျှင် အိမ်သို့ပြန်ကြသည်။ သူငယ်ချင်း များနှင့်တွေ့ကြ သည်။ ဆရာများနှင့်ပြော ဆိုဆက်ဆံပြီး ၎င်းတို့၏ လူမှုပြဿနာများကို အချင်းချင်း ဖွင့်ဟဆွေးနွေးကြသည့် သဘောရှိ သည်။
ယခုအခါမူ အားလုံးက အချင်းချင်း စကားမပြောအား။ လူကိုယ်တိုင်မတွေ့အားကြ။ အားလုံးဖေ့စ် ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာတွေ့ သည်။ အသိပေးသည်။ စာရင်း ရှင်းကြသည်။ ရန်ဖြစ်ကြသည်။ ရန်ကုန်က အေမီချို တို့လို မိသားစု ဝင်အချင်းချင်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ် မှာလူသိရှင်ကြား ရှင်းလင်းကြတာများလည်းရှိသည်။
သည်အရာတွေက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏ကောင်းကျိုးလား၊ ဆိုးကျိုးလား ယခုအချိန်မှာတော့ အေမီချိုတစ်ယောက် မစဉ်းစား အားနိုင်သေး။ အချိန်ရတုန်း သူ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ ဘလော့စရာ ရှိသူတွေကို ဘလော့ရဦး မည်ဖြစ် ပါသည်။
‘ယောက္ခမက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပေါ်မှာ အမေနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတော့ ကျွန်မကို ဘလော့ဂ်သွားတယ် လေ။ ဘယ်ရ မလဲ နေဦး ကျွန်မကလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်က သူတို့အမျိုးတွေကိုပါ ပြန်ဘလော့ဂ်ပြီး ရီပို့ပါ လုပ်ပေးလိုက် ဦးမယ်’
လူငယ် သို့ မဟုတ် ပြုန်းတီးနေသော လူ့ စွမ်းအား အရင်းအမြစ်
ကျန်းမာရေး လည်းကောင်း၊ ခံနိုင်ရည် လည်းရှိ၊ အမော အပန်းလည်း ခံနိုင်တဲ့ လူငယ် အင်အား စုကြီး မရောင်ရာ ဆီလူးပြီး ပြုန်းတီးနေ တာဟာ မိသားစု အတွက်ရော၊ လူ့ ဘောင် လူ့ အဖွဲ့ အစည်း ကြီး အတွက်ပါ ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံး မှုကြီး တစ် ရပ်ဖြစ်နေပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့သူတင် ကိုယ်တင် ရင်ဆိုင်ရာ မှာလည်း မျက်နှာပန်း မလှနိုင် ဖြစ်နေ ရတာကို ဘယ်လိုများ ပြုပြင် ယူနိုင်မလဲလို့တွေး ရင်း သက်ပြင်းမောတွေ ချရင်း ရာသီဥတုဒဏ်၊ ပင်ပန်းမှုဒဏ်၊ အရင်လို ကျန်းမာရေး မကောင်းတော့တဲ့ ဒဏ်တွေကို မာန်တင်းခံရင်း အလုပ်ဆက်လုပ်နေ ရတဲ့ အဖေ၊ အမေတွေကို မြင်ရတွေ့ရတဲ့ အခါမှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တရားသူကြီးဂိုက်၊ တရားပြ ဆရာကြီးဂိုက်တွေနဲ့‘ကိုယ်လည်း ငယ်ရာကကြီးလာတာပဲ၊ နားလည် ပေးလိုက်ပါ’ လို့ဆိုလာမယ့်သူတွေလည်း ကိုယ့်မိသားစုထဲ ဒါမျိုးဖြစ်နေရင်တော့ နားလည်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ လူကြီးတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို ယုံနိုင်စရာ မရှိအောင် အဓိပ္ပါယ်မဲ့တဲ့ ဒါမှမဟုတ် ရိုင်းပြတဲ့ ဆင်ခြေတွေ အကြောင်းပြချက်တွေပေးပြီး ဟာသလုပ် ရယ်မော ပစ်လိုက်မယ့် လူငယ်တွေမှာလည်း လိုက်ရယ်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေ ပြန်သွားလို့ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တဲ့အခါ ‘တစ်ကယ်တော့ ငါတို့ မှားတယ်’ ဆိုတဲ့ ၀န်ခံချက်တွေက ရင်ဘတ် ထဲမှာ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
နေ့ လည်ပိုင်းလောက်မှ အိပ်ယာထမယ်။ မနက်စာလား နေ့ လည်စာလား ပြောလို့ မရနိုင်တဲ့အပြင် အစားအစာလား အဆာပြေမုန့် လားဆိုတာကိုပါ ဆုံးဖြတ်မရနိုင်တဲ့ တစ်ခုခုကို စားမယ်။ အရည်လည်းမရ၊ အဖတ်လည်းမရ၊ မရယ်လို့ လည်းမရတဲ့ စကားတွေပြောကြမယ်။ အမှန်တစ်ကယ်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို နောက်ဆုံးအချိန် အထိ ဒါမှမဟုတ် အရမ်းနောက်ကျတဲ့အချိန်အထိ ရွှေ့ ဆိုင်းထားကြမယ် ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုမှလုပ်ယူလို့မရနိုင် တော့တဲ့ အချိန်ကျမှ ‘အာ့ မလုပ်လို့မရဘူးလား’ လို့ကြောင်တောင်တောင် လာမေးကြမယ်။ သူတို့ ကို သွားများ မဆူလိုက်နဲ့ ၊ ဆူလိုက်ရင် တစ်နေကုန် ၀မ်းနည်းတယ် ဆိုပဲ။
အလုပ်တစ်ခုကို ၀တ္တရားလိုမကျင့်သုံးတတ်ကြဘူး။ ဒီနေ့ ခိုင်းရင် ဒီနေ့ ပဲလုပ်တယ်။ နောက်နေ့ကိုယ်ပိုင် အသိစိတ် နဲ့မလုပ်ကြဘူး။ မိသားစု၊ အဖေ၊အမေအတွက် အဆင်ပြေလွယ်ကူအောင် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေး ဖို့ဝေးသေး၊ သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်လာပြီး အိမ်မှာ သောင်းကျန်းချင်သေး။ အပေါ်က တရားသူကြီးမင်း များ ပြောသလိုပဲ ဒီလူငယ် တွေဟာ တစ်သက်လုံး ဒီလိုနေသွားမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လာကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ပြုန်းတီး နေကြမယ့် နှစ်အပိုင်းအခြားက အနည်းဆုံး (၅) နှစ်ရှိတယ်ဆိုတာ လူ့ စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အပေါ် အခြေခံပြီး မိသားစု၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး တည်ဆောက်နေရသူတွေ အတွက် အထိတ်တလန့် ဖြစ်စရာ မဟုတ်ပါလား။ ဒါဖြစ်ရင် လူငယ်တွေမှာ ကူးစက်ပြန့် ပွားနေတဲ့ ဗိုင်းရပ်က ဘာများပါလိမ့်။
Social Responsibility လို့ ခေါ်တဲ့ လူမှု တာဝန် ယူတတ်တဲ့စိတ် ကင်းမဲ့ခြင်းပါ။ သူတို့ ဟာ ဆယ်ကျော် သက်တွေလို ရှင်သန်ရတာကို သဘောကျနှစ်သက် ပြီး လူဘောင်လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ လူသား တစ်ယောက်လို တာဝန်ယူရကောင်းမှန်း မသိကြသေးတာပါ။
ဥပမာ ကားကို သန့် ရှင်းရေးလည်း မလုပ်၊ ရေလည်းမဆေး၊ စီးပဲစီးချင်တဲ့ သားဖြစ်သူကို အဖေဖြစ်သူက စည်းကမ်းချက် ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ‘မနက်ထပြီး ကားသန့် ရှင်းရေးမလုပ်ရင် အဲဒီနေ့ အဖို့ကားမသုံး ရဘူး’ ပေါ့။ ဒါကို သားတော်မောင်က မနက်တိုင်းထပြီး ကားသန့် ရှင်းရေး လုပ်ရကောင်းမှန်း နားလည်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့‘အာ့ဆို ပြီးရော’ ဆိုပြီး ကားကိုရွဲ့ ပြီးမသုံးဘဲ ထားတာပေါ့။ တစ်ကယ်ဖြစ်သင့်တာက ‘အဖေနဲ့အမေစီးမယ့်ကားကို မနက် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ငါရွိုင်းထားမယ်’ ပေါ့။
သူတို့ စားဖို့ သောက်ဖို့ဈေးဝယ်ရမယ့်အမေဟာ ဘယ်လိုမှ ကြည့်မကောင်းအောင် ညစ်ပတ်နေတဲ့ ကားကို ဈေးသွားဖို့ လဲထားပြီး အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ထားရင်းနဲ့ ပဲ ဆေးကြောနေရတဲ့ အချိန်မှာ အိပ်ယာထဲ ဆက်နှပ်နေတဲ့ လူငယ်တွေကို စာရေးသူကိုယ်တိုင် ဆူပူမာန်မဲခဲ့ရဖူး ပါတယ်။
နေ့ ဆိုင်း၊ညဆိုင်း အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အဖေဖြစ်သူမှာ ညကြီးသန်းခေါင်လောက် ရေနွေးသောက်ချင်ရင် လုပ်လက်စအလုပ်တွေချပြီး ကိုယ်တိုင်စီစဉ်သောက်ရတာတွေရှိပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲခြေကန်ကြည့်နေတဲ့ လူငယ်တွေက ‘အဖေ၊ သားကိုလည်း တစ်ခွက်လောက်’ လို့ မပြောတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်နေရပါတယ်။
မိဘတွေဟာ ကိုယ့်သား၊သမီးကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အပြစ်မမြင်ကြပါဘူး။ အပြစ်မြင်ရင်လည်း အတတ်နိုင် ဆုံး မြိုသိပ် ထားကြပါတယ်။ တစ်ခုခုပြောလိုက်လို့သူတို့ လေးတွေစိတ်ဆိုးပြီး အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားရင် အပြင်မှာ ဒုက္ခလှလှ တွေ့ တော့မှာပဲ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ် ရှိကြပါတယ်။ ပြောမိပြန်ရင်လည်း အရိုင်းစိုင်းဆုံး တုန့် ပြန်တတ်တဲ့ လူငယ်တွေ ကြောင့် အိပ်ယာထဲ နှစ်ရက်လောက်ခွေနေ ချင်လောက်အောင် စိတ်ပျက် လက်ပျက် ဖြစ်ကြရတာ မိဘတွေပါပဲ။ သားတွေ၊သမီးတွေ ကြီးလာရင် ငါအိပ်ရေး ၀၀အိပ်ရ မှာပဲလို့တွေးပျော်ခဲ့တဲ့အဖေဟာ သားဖြစ်သူရဲ့ညမအိပ်၊ မနက်မထ နေထိုင်မှုပုံစံကို မချိတင်ကဲဖြစ်ရုံက လွဲပြီး ဘာမှမတတ်နိုင်။
ဒီလူငယ်တွေမှာ Social Responsibility ရှိဖို့လိုအပ်နေ ပါတယ်။ လူ့ ဘောင်လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း ထဲမှာ နေထိုင်ကြသူ တွေ ဖြစ်တဲ့အလျောက် လူသား တစ်ယောက်လို တာဝန်ယူတတ်ဖို့ တော့ လို အပ်နေပါတယ်။ သူတို့ ပြောင်းလဲသွား မယ့် အချိန်ကို စောင့်နေမယ်ဆိုရင် လူ့ စွမ်းအား အရင်း အမြစ် ပြုန်းတီးမှုကြီးဟာ ကြောက်ခမန်းလိလိ ဖြစ်နေဦးမှာ ပါပဲ။
ဒါဖြစ်ရင် ဒီလူငယ်တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ ပထမဆုံး သင်နေထိုင်တဲ့မြို့ ကလေး ကို လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ လူငယ်တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ နေရာတွေက ပိုများနေသလား၊ သူတို့ လေး တွေကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်နိုင်တဲ့ နေရာတွေက ပိုများနေသလားပေါ့။ များလိုက်တဲ့ ဘီယာ ဆိုင်၊ အကင်ဆိုင်တွေ၊ ဂိမ်းဆိုင်တွေ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ၊ ကျူခုံတွေ၊ ခေါင်းလျှော်ဆိုင်တွေ၊ အစရှိ သည်ဖြင့် အသိမကြွယ်သေးတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့အိပ်ကပ်ထဲကနေ ပိုက်ဆံရသလောက် ယူမယ့်ဆိုင်တွေပဲ များပါတယ်။
ဒါဖြစ်ရင် အဲဒီလူငယ်တွေ အားကျ အတုယူရမယ့် စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ရှာကြည့်ရအောင်ပါ။ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်တွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ၊ အားကစားသမားတွေ ဆီကနေ ယောက်ျား ပီသလာမယ့် အမူအကျင့်တွေများ လူငယ်တွေ ရနေ ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်ထဲက ခေါင်းဆောင်တွေ ဆီကနေများ လူမှုတာဝန်ယူတတ်စိတ်တွေ ရနေ ကြသလား။ ဒါမှမဟုတ် ကျောင်း၊ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက စာများများ ဖတ်လာကြသလား။ တစ်ကယ်တော့ လူငယ်တွေဆိုတာ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမယ့်သူ မရှိဘဲ စမ်းတ၀ါးဝါး လျှောက်နေကြရသူတွေ ဖြစ်နေ တာ ပါလား။
တရားဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးရော၊ တရားမ၀င် မူးယစ်ဆေးဝါးပါ ဖောဖောသီသီ ရှိနေတဲ့ ဒေသတွေမှာ ဆေး မစွဲကြသေးတာကိုပဲ ချီးကျူးရမှာလိုလို။ စာကလွဲရင် ဘာမှမသင်တဲ့ ကျောင်းကို နေ့ တိုင်းအချိန်ပြည့်သွားပြီး အရည်လည်းမရ၊ အဖတ်လည်းမရ၊ မရယ်လို့ လည်းမရတဲ့ စကားတွေကို ကြံဖန် တီထွင်ပြောနိုင်ကြတာ ကိုပဲ တော်နေ သလိုလို။ လူငယ်တွေလမ်းကြောင်းပျောက်နေတယ်လို့ ဆိုတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ကကော ဘယ်လို လမ်းကြောင်း တွေကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သလဲလို့ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လည်း ဘယ်သူ့ ကို လက်ညိုး ထိုးရမှန်းမသိ။
တောင်ကြီး တစ်တောင်ကို လမ်းပြလည်းမပါ၊ ကိရိယာလည်းမစုံဘဲ ပျော်ပျော်ကြီးတက်နေကြတဲ့ လူငယ်အင်အားစု ကို လမ်းပြပေးမယ့်သူတွေ လိုနေပါတယ်။ ပစ္စည်းကိရိယာတွေလည်း ထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုနေပါတယ်။ တန်ဖိုးကင်းမဲ့ စွာ ရှင်သန်နေထိုင်နေရတဲ့ လူ့ ဘောင်လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ သူတို့ ရဲ့တန်ဖိုးတံဆိပ်ကို အသစ်ကပ်ပေးမယ့် ပညာရှင်တွေ လိုအပ်နေပါတယ်။
ဒါဟာ ဘယ်သူ့ မှာ တာဝန်ရှိသလဲလို့ မေးလာရင်း လူကြီး၊လူငယ် နှစ်ဖက်လုံးမှာ တာဝန်အပြည့်အ၀ ရှိပါတယ်လို့လေ့လာရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Email လား Gmail လား :-P
Friday, January 30, 2015 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
Facebook ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Email အစား Gmail သုံးစွဲသူ ၁.၉၈ သန်းခန့်ရှိလာ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး email နဲ့ gmail ငြင်းခုန်နေ ကြပါတယ်။ အမှန်တော့ ဆောင်းပါးကို ကူးချရမှာ ခေါင်းစဉ် လွဲသွားတာဖြစ် တယ်လို့ မူရင်း စာရေးတဲ့သူက ဆိုပါတယ်။
Email နဲ့ Gmail ဘယ်လိုကွာလဲ ဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။ Email ဆိုတာ electronic mail ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ စတင်ပြီး တစ်ယောက်(သို့) တစ်ယောက်ထဲ ပိုတဲ့ သူတွေ ဆီကို digital message ပို့တဲ့ စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Email address တစ်ခုမှာ Local Part ရယ် Domain Part ရယ်ဆိုပြီး ပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ myatminsoe@myanmarmobileapp.com ဆိုရင် @ ရှေ့က myatminsoe ကို local part လို့ခေါ်ပြီး @နောက်က myanmarmobileapp.com ကို domain part လို့ခေါ်ပါတယ်။ Email Address ဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လုံးဝမတူပဲ unique ဖြစ်ပါတယ်။ domain part တူရင် local part မတူရပါဘူး။ local part တူရင် domain part မတူရပါဘူး။ myatminsoe@myanmarmobileapp.com နဲ့ myatminsoe@gmail.com ဟာ domain part မတူတဲ့အတွက် နှစ်ခုလုံး ရှိနိုင်ပါတယ်။ Google က ထုတ်လုပ်တဲ့ Gmail ဟာ email တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ domain part ဟာ gmail.com နဲ့ ဆုံးတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ @gmail.com အသုံးပြုသူ ၁.၉၈ သန်းရှိတယ်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ @gmail.com အပြင် @yahoo.com, @outlook.com, @icloud.com အစရှိတဲ့ email တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ email ထဲမှာ တော်တော်များများက အခမဲ့ရပြီး တစ်ချို့က လစဉ်ကြေးပေးရတဲ့ @mptmail.com.mm လိုမျိုး email တွေလဲ ရှိပါတယ်။ me@myatminsoe.com လိုမျိုး ကိုယ်ပိုင် domain နဲ့သုံးတဲ့ email တွေလဲ ရှိပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို email နဲ့ gmail ဘာကွာလဲဆိုပြီး မေးစရာမလိုတော့ ဘူးထင်ပါတယ်။
Advanced SystemCare Ultimate v7.1.0.625 Final + Serial Key
Thursday, January 29, 2015 Anti-virus & Security
မိမိကွန်ပြူ တာရဲ့ Speeds ကို အရင်ကထက် ပိုမို သွက်လက်မြန်ဆန်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ဒီဆော့ဝဲလ်လေး ကိုဆောင်ထားလိုက် ပါဗျာ။ ဒီကောင်လေးကတော့ viruses and spyware,malware တွေကို scanning လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် registry and shortcut fixes, junk files စသည်တို့ကို removing လုပ်ပေးနိုင် သည့်အပြင် အကောင်းဆုံး ကွန်ပြူတာအတွက် ဗိုင်းရပ်ရန်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ anti-virus and system optimization tool တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သုံးဖူးတဲ့ သူတိုင်းသိပြီး သားပါ။ အသုံးတည့်မယ့် Tools ပေါင်း များစွာ၊ လုပ်ဆောင်ချက်ပေါင်းများစွာ နဲ့ ပေါ့ပါးပြီးစိတ်ချရတဲ့ Antivirus ပါဝင်တယ် ဆိုတာကတော့ လူ တိုင်း သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Antivirus ကိုလည်းပေါ့သေးသေး မထင်နဲ့နော် BitDefender antivirus technology and IObit anti-malware engine ကိုထည့်သွင်း ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် သိချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အမြဲတမ်း သုံးနိုင်အောင်လို့ Serial Key ကို ပါရေးပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။
ကိုမျိုး(သုတစွယ်စုံ)(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook PageTwitter Google+
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သုံးဖို့ အတွက် Barcode producer
Thursday, January 29, 2015 Multimedia
စီးပွားရေး လုပ်ငန်း သုံးဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပျော်တမ်း လက်တည့်စမ်းချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် Barcode producer လေးကို ပြန်လည် မျှ ဝေ ပေးချင်ပါတယ်။ မိမိ ဆော့ ဝဲ ကောင်း လေး ဖြစ်လို့အားမနာ တမ်း ဒေါင်း နိုင်ပါတယ်။ Full Version ဖြစ်ဖို့ အတွက် keygen ကို အသုံး ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ full version ဖြစ်အောင် မလုပ်တတ် သေးရင် အောက်က video ကို ကြည့် ပြီး လုပ်ပေးပါ။
full version ဖြစ်အောင် လုပ်နည်း video file ကို ကြည့်ရန် ဒီမှာ နိုပ်ပါ။
ဒေါင်းရန် // Google drive , solidfiles
စိုင်းသူ (နည်းပညာ ပြန် လည် မျှ ဝေ ခြင်း )
priPrinter 6.2.0 Build 2333 Professional With Keygen Full Version Size(4.5MB)
ကွန်ပျူတာမှာ ဓါတ်ပုံတွေ စာရွတ် စာတမ်းတွေကို အလွယ်ကူးဆုံး Print ထုတ်ချင် သူများအတွက် priPrinter 6.2.0 Build 2333 Professional အသစ် ထွက်လာလို့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီအသစ်မှာတော့ ဓါတ်ပုံများကို passport ပုံများကဲ့သို့ ပုံတူ ပွားယူနိုင်ပါတယ် နောက်ပြီး ဓါတ်ပုံကို ထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်း အလွန်မြန်ဆန်ပြီး ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်စွာ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဓါတ်ပုံများကိုလည်း 3D နည်းပညာနဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင် လို့ရပါတယ် လိုအပ်ရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်းအောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ် ..
Brushes lighting effects For Photoshop Tool (15MB)
ပိုတိုရှော့အတွက် အလွန်အသုံးဝင်မည့် Burshes Lihhting Effects လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Internet Download Manager (IDM) 6.21 build 19 Crack & Patch Full Version Size(7MB)
Thursday, January 29, 2015 Internet Download Manager
Internet Download Manager 6.21 Build 19 တဲ့ အသစ်ထွက်ရှိလာပပါပြီခင်ဗျာ။Full version လေးဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ကိုနှစ်သက်ပြီး ဗားရှင်း အသစ်တွေကိုမှ သုံးချင်ကြ သူများအောက်မှာ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်
1 - Close/uninstall previous version of IDM
2 - Install version 6.21 build 19
3 - IDM may show you some notification like "You have registerd IDM withafake serial number" don't get frightened, just close those notifications and close IDM from system trey (bottom right corner of screen). Remenber IDM can't stey open when you follow below steps.
4 - Copy all files(2) from ''Crack'' folder and past (replace) it in orginial installed folder (normally
C:\_Program Files (x86)\_Internet Download Manager or
C:\_Program Files\_Internet Download Manager)
5 - Go to "Reg" folder and run reg file
Dtac Zte phone Firmware များ
Thursday, January 29, 2015 Android Firmware နှင့် Rooting ဆိုင်ရာ
ထိုင်းမှာ DTAC ကုမဏီ တံဆိပ်ကပ် zte ဖုန်းတွေ ရဲ့ Firmware လေ တွေကို အလွယ် တစ်ကူ ဒေါင်းလို့ ရအောင် စုစည်းပေးထားတာပါ အသုံးလို သူတွေ ဒေါင်းပြီ သိမ်းထားကြနော်
Dtac Joey Jump 3.5 zte v 797 firmware ဒေါင်းရန်
DTAC Cheetah Turbo zte v817 firmware ဒေါင်းရန်
ZTE Grand X V970M firmware ဒေါင်းရန်
Dtac V765M Firmware ဒေါင်းရန်
Dtac v769M firmware ဒေါင်းရန်
Dtac v779M firmware ဒေါင်းရန်
Dtac v797+ firmware ဒေါင်းရန်
v 815 w Firmware ဒေါင်းရန်
Dtac v817 Firmware ဒေါင်းရန်
Dtac v803w firmware ဒေါင်းရန်
Dtac v972m firmware ဒေါင်းရန်
post by https://www.facebook.com/smartghostsmartghost
Android Firmware နှင့် Rooting ဆိုင်ရာ,
Samsung All Charging Port Models
Thursday, January 29, 2015 မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ပြုပြင်နည်းဆိုင်ရာ
iOS 8.1.3 Released with Bug Fixes
Wednesday, January 28, 2015 iOS Devices ဆိုင်ရာ
iOS Devices ဆိုင်ရာ,
Video Editing အခြေခံ လေ့ကျင့်ခန်း အပိုင်း-ငါး (DVD Menu ဖန်တီးနည်းနှင့် အခွေထုတ်နည်း-ပထမပိုင်း)
Monday, January 26, 2015 Multimedia
ဒီနေ့ Video Editing လေ့ကျင့်ခန်း အပိုင်း-၅ ပိုစ့်မှာတော့.. DVD Menu ဖန်တီးနည်းနှင့် အခွေထုတ်နည်းကို တခါတည်း အကုန်တင်ပေးချင်ပေမယ့် ပုံတွေများလွန်းတဲ့အတွက် ပထမပိုင်းအဖြစ်သာ အပိုင်းထပ်ခွဲပြီး တင်ပေးလိုက်ရပါသည်..။ ဒုတိယပိုင်းကိုတော့ နောက်ရက်မှာ ဆက်တင်ပေးပါမည်..။
ဒီပိုစ့်က လုပ်နည်းတွေမှာ DVD သီချင်းခွေတချပ်ရဲ့ DVD Player ထဲမှာ ဖွင့်ဖွင့်ခြင်း ပေါ်လာတတ်တဲ့ Play All နဲ့ Select Songs တွေကို ရွေးယူကြည့်လို့ရမယ့် လုပ်နည်းတွေ ဖြစ်ပြီး.. Select Songs နေရာမှာတော့ မိမိတို့ ထားလိုတဲ့ သီချင်းတွေကို 1-2-3-4-5 စသဖြင့် စီတန်းပြီး ထည့်ထားလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ၎င်းနေရာကနေ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သီချင်းတပုဒ်စီကို ရွေးချယ်ဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်..။ Play All နေရာကနေ ဖွင့်ရင်တော့ သီချင်းတွေကို မိမိတို့စီထားတဲ့အတိုင်း တစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ် ပြီးတဲ့အထိ ဖွင့်ပြပေးပါလိမ့်မယ်..။ မိမိတို့အရင်နားထောင်လိုတဲ့ သီချင်းတွေကိုလည်း Next နဲ့ ကျော်ယူကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Previous နဲ့လည်း နောက်ပြန်ကျော်ယူကြည့်လို့ ရပါတယ်..။ နောက်တခုကတော့ သီချင်းစာသားတွေနဲ့ video အပိုင်းတွေကို ဆက်ထားပြီးတဲ့ Video Edit လုပ်ထားပြီးသား သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို DVD အခွေထုတ်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုဖေါ်မတ်၊ ဘယ်လို Width နဲ့ Height ကို ရွေးယူရမယ်ဆိုတာကိုလည်း ဒီပိုစ့်မှာ လုပ်ရင်းနဲ့ ပြပေးထားပါတယ်..။
ကျနော် အခွေထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ Project ဖိုင်နဲ့ ဒီပိုစ့်မှာ ဆက်ပြပေးပါမယ်..။ ဒီအောက်ကပုံလေးအတိုင်း သီချင်းနာမည်နဲ့ အဆိုတော်၊ တေးရေး စတာတွေကို Photoshop နဲ့ ပုံဖေါ်ပြီး JPEG ဓါတ်ပုံဖေါ်မတ်နဲ့ Save ပြီး သီချင်းရဲ့ ရှေ့မှာ ၈-စက္ကန့်ဆွဲဆန့်ထားပါတယ်..။ ပုံကိုလည်း မျှားအစိမ်းနေရာကနေ ယူပြီး ထည့်ပါတယ်..။ မျှားအဝါရောင်နေရာတွေကတော့ Video ဖိုင်တွေ တခုနဲ့တခုဆက်တဲ့ အပိုင်းတွေကို Fade တွေသုံးပြီး ဆက်ထားတာကို ပြထားတာပါ..။
အပေါ်ပုံမှာ ပြထားတဲ့ နေရာကတော့ Fade Effect ကို ဓါတ်ပုံနဲ့ Video ဆက်တဲ့နေရာမှာ အရင်ပိုစ့်တွေအတိုင်း ဆွဲထည့်ထားလိုက်တာပါ..။
အောက်ပုံမှာတော့ Video ရော၊ စာသားရော၊ သီချင်းရော စတာတွေကို Edit လုပ်ပြီးသွားလို့ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုံလေးကို မြင်ရအောင် အပြည့်ဖေါ်ပြပေးလိုက်တာပါ..။ နောက် သီချင်းဖိုင်ထုတ်ဖို့အတွက် မျှားအဝါနေရာက Produce နေရာကို ဆက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်..။
ဒီအောက်ကပုံ နေရာမှာတော့ ရွေးယူတာ DVD အခွေထုတ်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက် MPEG-2 >> DVD HQ 720x480 မျှားအဝါပြထားတဲ့ နေရာ မှန်အောင်ရွေးယူပါ..။ တကယ်လို့ ရိုးရိုး MP4 နဲ့ Video ဖိုုင်ထုတ်ချင်တာ ဆိုရင်တော့ MPEG-4 နေရာကနေ ဝင်ပြီး ထုတ်ယူပါ..။ ဒီမှာတော့ DVD အခွေအတွက် ထုတ်မှာဖြစ်လို့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း ထုတ်ယူပါတယ်..။ Output နေရာမှာတော့ ရှာရလွယ်အောင် Desktop ကို ရွေးပေးပြီး Start ကို နှိပ် ထုတ်ပါပြီ..။
အောက်ကပုံလေးတွေအတိုင်း ဆက်ပေါ်နေရင် ပြီးတဲ့အထိ စောင့်နေပေးလိုက်ပါ..။
အပေါ်ပုံအတိုင်း အစိမ်းရောင် အမှန်ခြစ်လေး ပေါ်လာရင်တော့ ကျနော်ထုတ်လိုက်တဲ့ 720X480 ဆိုဒ်ရှိတဲ့ Video ဖိုင်လေးကို ရရှိပါပြီ..။
အောက်ကပုံမှာမြင်ရတာတော့ အပေါ်ကနည်းအတိုင်း ထုတ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ကျနော် DVD အခွေထုတ်မယ့် သီချင်း ၁၂-ပုဒ် ကို ဖိုင်တခုထဲမှာ စုထည့်ထားလိုက်တာပါ..။
ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း Power Director ကနေ New Project ကို ပြန်စယူပါပြီ..။
ပြီးရင်တော့ သီချင်း ၁၂-ပုဒ်ကို အပေါ်ပုံနဲ့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း New Project ထဲ ဆွဲထည့်ပါတယ်..။
နောက်တဆင့်မှာတော့ မိမိတို့ ရှေ့ဆုံးမှ ပေါ်လိုတဲ့ သီချင်းကို အောက်ကပုံလေးအတိုင်း Time Line ထဲ တပုဒ်စီ ဆွဲထည့်လိုက်ပါ..။ မျှားအဝါနဲ့ ပြထားတာကတော့ Time Line ကို Zoom ဆွဲပြီး ကျုံ့ယူဖို့ ပြထားတာပါ..။
နောက်သီချင်းတွေကိုလည်း မိမိတို့ အစဉ်လိုက်ပေါ်လိုတဲ့ အတိုင်း တပုဒ်စီ Time Line ထဲ ဆွဲထည့်လိုက်ပါ..။
အပေါ်ပုံအတိုင်း သီချင်းအာလုံး Time Line ထဲ ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့.. ရှေ့ဆုံး တပုဒ်ကို အရင် တချက်ကလစ်ပြီး မျှားအဝါနဲ့ ပြထားတဲ့ 123 လို့ ပြထားတဲ့ Button နေရာလေးကို ဆက်နှိပ်ပါ..။ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း Chapter1 လို့ ဆက်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
အပေါ်ပုံနဲ့ အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ဒုတိယ သီချင်းပုဒ်ကို ဆက်နှိပ်ပြီး C+ နေရာကို ဆက်နှိပ်လိုက်ပါ..။
နောက်သီချင်း အပုဒ်တွေကိုလည်း ဒုတိယ သီချင်းပုဒ်နှိပ်သွားတဲ့အတိုင်း ဆက်နှိပ်သွားလိုက်ပါ..။
အပေါ်ပုံနဲ့ အောက်ကပုံတွေအတိုင်း ဆက်မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
အပေါ်ပုံအတိုင်း သီချင်း ၁၂-ပုဒ် ကို တန်းစီထားလို့ ပြီးသွားပါပြီ..။ စီထားပြီးသား သီချင်းတွေ အလွယ်ပြန်ယူသုံးလို့ ရအောင် ဒီ Project လေးကိုလည်း Save Project နဲ့ အရင် သိမ်းထားဖို့ လိုပါတယ်..။
အောက်ကပုံမှာ ပြထားတာကတော့ Chapter နေရာမှာ မိမိပြန်ပြောင်းထားလိုတဲ့ နာမည်ကို Right Click >> Rename ကနေ နာမည်ပြင်ပေးလို့ ရပါတယ်..။ ကျနော်က မြန်မာလို ပြောင်းကြည့်တာ မပေါ်တဲ့အတွက် သူပေးတဲ့အတိုင်း Chapter1,2,3,4 စသဖြင့်သာ ဆက်အသုံးပြုလိုက်ပါတယ်..။
ကျနော် Chapter1,2,3,4 နဲ့သာ ဆက်သုံးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အောက်ကပုံအတိုင်း Create Disc ကို ဆက်သွားပါတယ်..။
အပေါ်ပုံအတိုင်း ခဏစောင့်ပေးပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း ဆက်ပေါ်လာရင် Menu Structure ကနေ သီချင်းတွေ ဆက်သွယ်ထားပုံကို ကြည့်လို့ ရပါပြီ..။
အပေါ်ပုံမှာ မျှားအဝါနဲ့ ပြထားတာကတော့.. 4700 MB ဆိုတာ ရိုးရိုး DVD တချပ်ရဲ့ မန်မိုရီ အရှိကို ဖေါ်ပြထားတာဖြစ်ပြီး.. 3527 MB ဆိုတာကတော့ ကျနော်အခု ထည့်လိုက်တဲ့ သီချင်း ၁၂-ပုဒ်ရဲ့ မန်မိုရီကို ဖေါ်ပြပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီနေရာမှာ ဆိုလိုတာက 4700 MB ထက် မကျော်ရ၊ မပိုရ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ပါ..။ ဒီထက်ကျော်သွားရင် 8GB ရှိတဲ့ DVD R DL (Double Layer) Disc ကို အသုံးပြုဖို့ ဖြစ်ပါတယ်..။ သို့မဟုတ် Blu-ray Disc တွေကို ပြောင်းသုံးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါကို နားလည်ဖို့လိုပါတယ်..။ ဒီအဆင့်မှာ အဆင်ပြေရင်တော့ Menu Preferences ကနေ Create Menu ကို ဆက်ရွေးယူပါ..။
အပေါ်ပုံအတိုင်း ဆက်ပေါ်လာရင် Root Menu ကို အရင်ရွေးယူပါ..။ ပြီးရင်တော့ အောက်ကပြထားတဲ့ ပုံနေရာကနေ Menu မှာ ဖေါ်ပြလိုတဲ့ပုံ (သို့) Video ကို အရင် ဝင်ယူပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
အပေါ်ကပုံအတိုင်း ပုံတပုံ ဝင်ယူလို့ ရပေမယ့်.. ကျနော် တကယ်ပုံဝင်ယူတဲ့ နေရာကတော့ အောက်ကပုံလေးမှာ ပြပေးထားတဲ့အတိုင်းသာ Add Image ကနေ သွားယူတာဖြစ်ပါတယ်..။
အပေါ်ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ပုံတပုံ ရောက်လာရင်တော့ ဘေးနားတွေကို ဆွဲချဲ့ပြီး အောက်ကပုံအတိုင်း နေရာချပါတယ်..။ မျှားနီနဲ့ ပြထားတာကတော့ အဲဒီမျဉ်းကြောင်း ဘောင်လေးအတွင်းမှာသာ TV ဖန်သားပြင်မှာ ပေါ်နေမှာပါလို့ ဆိုလိုတာပါ..။ ဒါကြောင့် အလယ်ကျအောင်နဲ့ အားလုံးပေါ်အောင် ဒီပုံအတိုင်း ဆွဲဆန့်ပါတယ်..။ ဒီဘောင်လေး ပေါ်လိုရင် TV Safe Zone မှာ အမှန်ခြစ်တပ်ပေးလိုက်ပါ..။ (စကားချပ်။ ။ဒီသီချင်းခွေကို ညီအစ်ကိုလို ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်း ကောင်လေးတွေရဲ့ စိတ်ဆန္ဒအတိုင်း ခရစ္စမတ်အမှီထုတ်ချင်တဲ့အတွက် 2014 နိုဝင်ဘာ လဆန်းပိုင်းကတည်းက ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်..။ Menu ပုံမှာ မထင်မရှား ခပ်မှုံမှုံဒီဇိုင်းကိုသာ သူတို့ပေးတဲ့အတိုင်း ထည့်သုံးပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်..။)
နောက်တဆင့်မှာတော့ အပေါ်ပုံအတိုင်း အလယ်စာကြောင်းလေးတွေကို တခုစီ (သို့) အားလုံးကို စလက်ပေးပြီး Center ကို ဆွဲ ထည့်ခြင်းဖြင့် ညီညာစွာ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း မျှားအဝါနဲ့ ပြထားတဲ့နေရာမှ No Effect ကို ရွေးပါ..။
ဒီအောက်က ပုံလေးတွေမှာတော့ အောက်ခံပုံပေါ်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်နေစေမယ့် စာသားအရောင်ကို ရွေးယူထည့်တတ်အောင် ပြပေးထားတာပါ..။ စာသားဒီဇိုင်း ကြိုက်ရာကို ရွေးယူ နိုင်ပါတယ်..။
အပေါ်ပုံအတိုင်း စာကြောင်းတခုစီ အရောင်းတွေ ပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီနေ့ပိုစ့် ပထမပိုင်းကိုတော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်နားထားပါမည်..။ နောက်ရက်မှာ ဒုတိယပိုင်း၊ အပြီးပိုင်းကို ဆက်တင် ပေးပါမည်..။ သို့သော်.. ဒီနည်းက DVD သီချင်းခွေ ထုတ်နည်း တစ်နည်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်..။ နောက်ထပ် လုပ်နည်း အနည်းငယ်ကိုလည်း နောက်ပိုင်း ပိုစ့်တွေမှာ အပိုင်းတွေခွဲပြီး ဆက်လက် တင်ပေးပါအုန်းမည်..။ အားလုံးပဲ လေ့လာရင် အလွယ်တကူ တတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ..။
အများသုံးအိမ်သာကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် ဘယ်လိ...
လူငယ် သို့ မဟုတ် ပြုန်းတီးနေသော လူ့ စွမ်းအား အရင်း...
Advanced SystemCare Ultimate v7.1.0.625 Final + Se...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သုံးဖို့ အတွက် Barcode producer...
priPrinter 6.2.0 Build 2333 Professional With Keyg...
Brushes lighting effects For Photoshop Tool (15MB)...
Internet Download Manager (IDM) 6.21 build 19 Crac...
Video Editing အခြေခံ လေ့ကျင့်ခန်း အပိုင်း-ငါး (DVD...
ဖုန်းတစ်​လုံးမှာ ​ဖေ့ဘုတ်​​တွေ အများကြီး တင်​သုံး...
UltraISO v9.6.2 3059 + Keygen & OnlyOne
Huawei G610U00 TOUCH မရလျှင်ပြု ပြင်နည်း
HUAWEI MOBILE မျိုးစုံပြုပြင်နည်းလက်စွဲ
Windows + Office Re-Loader Activator V1.1 Final
Revo_Uninstaller_Pro_3.1.2 Full Version Software အ...
Video Editing အခြေခံ လေ့ကျင့်ခန်း အပိုင်း-လေး
ဈေးနှုန်းလား၊ အရည်အသွေးလား ဆော်သဟ
Meteor Shower ရိုက်ချင်သူများအတွက် သိထားသင့်သော အေ...
Budget Gears For Beginner....!
Full Frame, Crop Frame ဆိုတာဘာလဲ...?
Adobe Lightroom အခြေခံ အသုံးပြုနည်း (၁)
MacForUs Back Online
Video Editing အခြေခံ လေ့ကျင့်ခန်း အပိုင်း-သုံး
Record iPhone screen (No Jailbreak)
Medical abortion (2) ကိုယ်ဝန်ကို ဆေးသုံး ဖျက်ခြင်း (၂) (+18)